.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog က လင့်တွေကို ကာလာမျိုးစုံ ပေါ်အောင် လုပ်နည်း
Blog က လင့်တွေကို ကာလာမျိုးစုံ ပေါ်အောင် လုပ်နည်း
Blog က လင့်တွေကို ကာလာမျိုးစုံ ပေါ်တာလေး ကြိုက်လို့ သုံးနေကြတဲ့ သူတွေ တော်တော်လေးကိုများပါတယ်။
နမူနာ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာ ကြည့်နိုင်သလို ကျွန်တော့် Blog က လင့်တွေကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ Blog မှာရော အဲလိုမျိုး လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်..
3 -> Template ကုတ်တွေထဲက </head> ကို ကီးဘုတ်က Ctrl+F နှိပ်ပြီး Search Box မှာ Enter ခေါက် ရှာလိုက်ပါ။
တွေ့ပြီဆိုရင် ပုံထဲကအတိုင်း <head> အောက်မှာ ဒီအောက်က ကုတ်လေးတွေကိုထည့်ပြီး Save template ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် ကိုယ့် Blog က လင့်တွေကို မောက်နဲ့ လိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကာလာမျိုးစုံ လင်းလင်းလက်လက်လေးတွေ
ပေါ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
Posted by Thurainlin at 06:22